သင်၏ဘ ၀ သည်ထိုအရာအပေါ်မှီခိုပါကသင်၏ကုမ္ပဏီဘလော့ဂ်ကိုရေးပါ။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 15, 2007 သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2017 Douglas Karr
ဘလော့ဂါတွေကိုငါတို့မြေအောက်ခန်းထဲမှာပီဇာနဲ့ Mountain Dew နေရာအနှံ့ဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ hunkered ထင်ရတဲ့ရှေးရှေးတွေရှိတယ်။ ဘလော့ဂါများကိုသင်သတိမပြုမိရန်အခြားအမြင်ရှိသည်။ ဘလော့ဂါတွေဟာဆက်သွယ်ရေးကိုတောင့်တတဲ့လူမှုရေးသမားတွေပါ။
ဒီနေ့နံနက်ခင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ငါအုပ်စုနှင့်အတူ blogging နှင့်ငါ့ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်မဟာဗျူဟာအချို့ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးဖို့ငါ့အတှေ့အကွုံမြားကိုဆှေးနှေးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဟောပြောပွဲကိုအလွန်ကောင်းစွာလက်ခံခဲ့ပါတယ်နှင့်ငါအတော်လေးပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ဤဟောပြောပွဲနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာဘလော့ဂါများမှဖြစ်ပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တက်ရောက်သူများသည် Ball State တက္ကသိုလ်မှဌာနအကြီးအကဲပါမောက္ခတစ် ဦး မှကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံမှအိုင်တီကိုယ်စားလှယ်များအထိရှိသည်။ ငါအနည်းငယ်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် - သူတို့ကအရမ်းစပ်စု, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နှင့်စေ့စပ်ခဲ့ကြသည် (အမှန်တကယ် Sharp စိတ်များ!) ဘလော့ဂ်ရေးလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီရှေးရှေးတွေနဲ့မတွေ့ဖူးဘူး။
ငါ blogging စတင်ခဲ့သည်။ အဲဒီနောက် Pat Coyle ကိုဘလော့ဂ်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အတူတူကျနော်တို့ Indianapolis ရှေးရှေးသူတို့မြို့တော်ကိုဘာကြောင့်ချစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောပြဖို့ပွင့်လင်းတဲ့ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်။ Pat သည်ဥက္ကဌနှင့် CEO ဖြစ်သူ Ron Brumbarger နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် Bitwise ဖြေရှင်းနည်းများ ငါ့ blogging ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ Ron သည် Sharp Minds ကို ဦး ဆောင်ပြီးဒေသတွင်းရှိလူထုကိုနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်နှင့် Corporate Blogging သည်ဆွေးနွေးရန်သူတို့အတွက်အလွန်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။ ဒါနဲ့ Ron နဲ့ Pat ငါနဲ့အတူနေ့လယ်စာစားပြီးပြီ။
အားလုံး blogging မှ။
တက်ရောက်သူအားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းများရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏မျက်လုံးများစွာသည်လင်းနေခဲ့သည်။ တချို့ကမှတ်စုစာမျက်နှာများကိုရေးသားခဲ့သည်။ ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ခေါင်းငိုက်စိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ဒါဟာအခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်သောအုပ်စုတစ်စုနှင့်ဤနည်းပညာကိုဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။
စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုအများစုသည်ကုမ္ပဏီများကထိုခြေလှမ်းကိုလှမ်းရမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မဆိုကဲ့သို့ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကော်ပိုရေးရှင်းအတွင်းမဟာဗျူဟာနှင့်လမ်းညွှန်အချို့လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးပါကသင်၏လုပ်ငန်းနှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုရှေ့ဆောင်အဖြစ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်၊ သင်၏ထုတ်ကုန်ပတ် ၀ န်းကျင်၌စကားပြောဆိုမှုတွင်ပထမဆုံးမိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်မင်းကိုရှေ့သို့တိုးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်ထင်မြင်မိသည်မှာကုမ္ပဏီများသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုတွန်းပို့မည့်အစားနည်းပညာအသစ်များကိုလက်ခံကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Kent ပြည်နယ်မှသူတို့၏အားကစားသမားများအားဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်တင်ခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့လျှင်စိတ်ကူးကြည့်ပါ အားပေးစောင့်ကြည့် အားကစားသမားတွေရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အစား ဒါကစိတ်ကူးကောင်းတဲ့စုဆောင်းမှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော ထင်တာပဲ။
Ball State မှပါမောက္ခနှင့်စကားပြောသောအခါ Freshman ၏ဘလော့ဂ်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရခြင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသားများအားကောလိပ်ဘ ၀ တွင်ပညာပေးခြင်း၊ ဝေးဝေးနေခြင်းနှင့်လွတ်လပ်မှုနှင့်ကောလိပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများမည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုစဉ်းစားမိသည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောဘလော့တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဖြစ်ကောင်းစွာ, ငါ့ဘလော့ဂ်မှာငါ့ကိုဆင်းသက်ခဲ့သည် Indiana လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကောင်စီ ယနေ့ညဥက္ကof္ဌ၏ဥက္ကRog္ဌရော်ဂျာဝီလျံနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် အရေးပေါ်ခေါင်းဆောင်မှုအင်စတီကျု။ ရော်ဂျာသည်ဒေသတွင်းရှိလူငယ်ခေါင်းဆောင်များ၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကိုညှိနှိုင်းတည်ဆောက်ရန်လူမှုကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဝိုး!
ငါသည်လည်းထံမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့စစ်ပြန်များနှင့်မိသားစုများကိုကူညီခြင်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့စစ်ပြန်များကိုနှစ်ရှည်အကြံပေးခြင်းနှင့်ဂရုစိုက်ခြင်းအစီအစဉ်များဖြင့်ပြန်လည်ခြေရာခံနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည့်မယုံနိုင်စရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု။ ၎င်းတို့တွင်အစားအစာ၊ အမိုးအကာ၊ အလုပ်နေရာအစရှိသဖြင့်သူတို့၏အစီအစဉ်တွင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ၀ န်ထမ်း ၁၄၀ ရှိသည်။
ဤအမြတ်အစွန်းမဟုတ်သောသူများ၏စိတ် ၀ င်စားမှုသည်အံ့သြစရာကောင်းပြီးသူတို့အားလုံးသည်နည်းပညာတွင်အခွင့်အလမ်းများမည်သို့တွေ့မြင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားအားပေးခဲ့သည်။ အုပ်စုနှစ်ခုအကြားတွင်အချို့သောခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုရှိသည်။ နံနက်ခင်းအုပ်စုတွင်နည်းပညာသစ်များကိုသိလို။ အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရှိခဲ့ပြီးထိုစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကမည်သည့်အရာသို့နည်းနည်းစိုးရိမ်လိမ့်မည်နည်း။ ညနေခင်းအုပ်စုသည်အခြားလူများနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာဆက်သွယ်နိုင်မည့်နောက်ထပ်နည်းပညာကိုအလွန်လိုချင်ခဲ့သည်။
သင်၏စီးပွားရေးသည် Vet ကိုကယ်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဆာလောင်နေသူတစ် ဦး အတွက်နောက်တစ်နေ့အစာစားရန်အတွက်ဖြစ်သည့်အခါမည်သည့်နည်းပညာကမဆိုအလွန်ကောင်းပါသည်။
Tags: bitwise ဖြေရှင်းချက်ဘလော့ဂ်ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ပေါ်ထွက်လာသောခေါင်းဆောင်မှုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့စစ်ပြန်IndianapolisKent ပြည်နယ်pat coyleချွန်ထက်သောစိတ်